ဖုန်းနံပါတ်: + 86-18306398869
ကွန်ကရစ် Boom Pump Truck ကား
အသေးစား Fine ကျောက်ခေတ် Pump
ကွန်ကရစ်ရောနှော Truck ကား
Constru သည် 37M ကွန်ကရစ် Pump Truck ကား KNL5231THB37-5RZ ...
Isuzu ကား Truck ကားနှင့်အတူ 58m ကွန်ကရစ် Boom
ကွန်ကရစ် Pump XBS30
XBS နှင့် DXBS စီးရီးဒဏ်ငွေသောကျောက်ကွန်ကရစ်ပန့်များမှအကျဉ်းချုပ်မိတ်ဆက်
XBS DXBS စီးရီးထုတ်ကုန်အထူးကြမ်းပြင်အပူစီမံကိန်းများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများသည်နှင့်အညီတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပစ္စည်းကိရိယာများသယ်ဆောင်မော်တာတစ်မျိုးရှိပါတယ်။ သူတို့ကကျယ်ပြန့်ကြီးမားသောဧရိယာနှင့်ကြမ်းပြင်အပူစီမံကိန်းများတွင်ဒဏ်ငွေသောကျောက်ကွန်ကရစ်သို့မဟုတ်မော်တာ stuffing ၏မြင့်မားအကျိုးရှိစွာဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လျှောက်ထားနေကြပါတယ် ...
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: TT, LC or 30%TT+70% TT or LC
လျှပ်စစ်အမျိုးအစား: XBS30-10-37, XBS40-11-45
Output ဖိအား: 10Mpa 11Mpa
။ Cylinder DIA လေဖြတ်×: Φ140 * 1200mm
ရေနံ Pump: PLA7313 / Kawasaki
မော်တော်အမှတ်တံဆိပ်: Yantai / Siemens
: အမြင့် / အကွာအဝေးချပေး 120 မီလီယံ / 360m
စွမ်းဆောင်ရည်ချပေးမက်စ်: 40m3 / ဇ
Output ဖိအား: 11Mpa
ဒီဇယ်အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ်: LOVOL / Yuchai / Commins
ပုံစံ XBS20-08-30 XBS30-10-40 XBS40-11-48 HBX40-11-55 DXBS40-11-56 DHBX40-11-56
Drive ကိုအမျိုးအစား ဒီဇယ် (LOVOL / Commins)
Max.Theo ။ output Volume ကို (M3 / ဇ) 20 30 40 40 40 40
မက်စ်။ ထွက်ပေါက်ဖိအား (MPA) 8 10 11 11 11 11
Max.Aggregate အချင်း (မီလီမီတာ) ≤30 ≤30 ≤30 ≤40 ≤30 ≤40
ဆလင်ဒါအချင်း (မီလီမီတာ) Φ140 Φ140 Φ140 Φ180 Φ140 Φ180
Power က (KW) 30 37 45 55 56/54 56/54
အဓိကရေနံ Pump PLA7313 / Kawasaki
Delivery ပိုက်လိုင်း (မီလီမီတာ) ၏အတွင်းစိတ်အချင်း Φ80 Φ80 Φ80 Φ125 Φ80 Φ125
Dimension (မီလီမီတာ) * 1500 * 1550 4000 * 1500 * 1550 4300 * 1500 * 1550 4300 * 1500 * 1720 4500 * 1500 * 1720 4500 * 1500 * 1720 4600
ယေဘုယျအားအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 2000 2200 2700 2900 3000 3200
Max.Delivery အဝေးသင် (ဍ) (ဒေါင်လိုက် / Horizontal) 420/140 500/175 570/190 600/200 570/190 570/190
အဖုံး 1set များအတွက် 20GP 1set များအတွက် 20GP 1set များအတွက် 20GP 1set များအတွက် 20GP 1set များအတွက် 20GP 1set များအတွက် 20GP
ဌ XBS DXBS စီးရီးထုတ်ကုန်အထူးကြမ်းပြင်အပူစီမံကိန်းများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများသည်နှင့်အညီတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပစ္စည်းကိရိယာများသယ်ဆောင်မော်တာတစ်မျိုးရှိပါတယ်။ သူတို့ကကြမ်းပြင်အပူစီမံကိန်းများတွင်ဒဏ်ငွေသောကျောက်ကွန်ကရစ်သို့မဟုတ်မော်တာ stuffing ၏ဆောက်လုပ်ရေးကျယ်ကျယ်ကြီးဧရိယာ၌လျှောက်ထားခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းအကျိုးရှိစွာနေကြသည်။
ဌ XBS DXBS စီးရီးထုတ်ကုန်ကိုလည်းကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသောဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများတွင်ဒဏ်ငွေသောကျောက်ကွန်ကရစ်မီး-ခံနိုင်ရည်နှင့်အပူ-ကာကှယျပစ္စည်းများ၏ conveying အတွက်အသုံးပြုနေကြသည်; Eco-သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်မြေဆီလွှာကို afforesting များ၏ပို့ဆောင်မှု; အမျိုးမျိုးသောအခြေခံလိပ်ခေါင်း၏ဖိအား grouting ။
ဌ ဟောင်းတဦးΦ 80 ပေါ်အခြေခံပြီးပိုက်သယ်ဆောင်၏အတွင်းပိုင်းအချင်းΦ100သို့တီထွင်ထားပါတယ်ဒါကြောင့် DXBS စီးရီးထုတ်ကုန် XBS DXBS စီးရီးထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့မော်တာ၏ conveying အဖြစ်ကျယ်ပြန့် applications များရှိစေသည်ဖြစ်သော 30mm ထက်မပိုအချင်းအတူကွန်ကရစ်ဖျောပွနိုငျသညျ XBS, အသေးစားကျောက်များ နှင့်စုစုပေါင်းကွန်ကရစ်ကြီးမား။
ဎ Hydraulic System ကို
အသစ်ဟိုက်ဒရောလစ်အသွားအပြန်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာစုပ်စက် wor စေသည် ဋ ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၏တစ်ဦးအနိမ့်ကျရှုံးမှုနှုန်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရှည်ဝန်ဆောင်မှုသေချာ, ကြီးမားတဲ့စီးဆင်းမှု, နည်းနည်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနဲ့အလင်းသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအထူးလုပ်ဆို့ရှင်တပ်ဆင်ထားသည်။
အီး ဌ ectromotor ကျော်ကြားအမှတ်တံဆိပ်အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာ, ချမှတ် Yantai Moto r နှင့် Siemens ၏ Beide မော်တော် , ဒီဇယ်အင်ဂျင်ချမှတ် LOVOL , Yuchai သို့မဟုတ် Weichai Brand with low energy consumption and high efficiency
အဓိကရေနံစုပ်စက်ဖက်စပ်ချမှတ် အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ် Kawasaki serial constant power variable plunger pump. Constant power control is effective to prevent the electromotor or diesel engine form overloading. It can withstand higher pressure and load than conventional gear pump.
ဒါဟာအအေးနှင့်ရေအအေးနဲ့အတူပူရာသီဥတုအဘို့အဒါပေမယ့်လည်းအအေးရာသီဥတုအဘို့မသာ Dual-အေးစနစ်, ချမှတ်; ကထိထိရောကျရောဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၏ရေနံအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်နှင့်လုံခြုံမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသေချာနိုင်ပါတယ်။
ပင်မလျှပ်စစ်ဒြပ်စင်များမှာ Schneider နှင့် Siemens အမှတ်တံဆိပ်။
ဎ Hopper device ကို
အဆိုပါ Hopper တွေလည်းစွမ်းရည်-တိုးတက်ခြံစည်းရိုးနဲ့အတူဒွန်တွဲနှင့်ဒဏ်ငွေစုစုပေါင်းကွန်ကရစ်မြစ်ရေတင်စီမံကိန်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တုန်ခါမှုမော်တာတပ်ဆင်ထားသည်။
ဎ S ကိုပြွန်
S ကပြွန်အဆို့ရှင်မြင့်မားသောမန်းဂနိစ်သံမဏိနှင့်အတူပုံစံသို့ casted ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလွယ်ကူတဲ့ဝတ်ဆင်မျက်နှာပြင် Anti-ဝတ်ထားနှင့်အတူ welded လျှင်။ အတွင်းချောချောမွေ့မွေ့ပြွန်အကူးအပြောင်း၏မျက်နှာပြင်နှင့်ကွန်ကရစ်နောက်ထပ်မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်, ထိုပြွန်ထဲမှာလွတ်လပ်စွာစီးဆင်းနိုင်ပါ။ အဆိုပါ splined ရိုးအလွိုင်း၏ဖန်ဆင်းထားသည်နှင့်မျက်နှာပြင်အထူးသ Anti-ဝတ်ထားနဲ့ anti-ပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်, ကုသနေပါတယ်။
ဎ Hydraulic ပိုက်အဆစ်
ဟိုက်ဒရောလစ်ပိုက်အဆစ်: အမေရိကန် Eaton; ပိုက်လိုင်း: အီတလီနိုင်ငံကနေမူရင်း။
အဆိုပါချောဆီအရည်ကြည် plunger စုပ်စက်တို့ကအဓိကရေနံလိုင်းမှထိုးသွင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိခြင်းဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီချောဆီအရည်ကြည်အမှတ်ဖြန့်ဝေပါလိမ့်မည်။ point-to-point ချောဆီအရည်ကြည် wear နဲ့မျက်ရည်ကနေအဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ယခင်: အလျားလိုက် HGY17 HGY19
နောက်တစ်ခု: လျှပ်စစ် HBT60-13 ကွန်ကရစ် Pump
ဘိလပ်မြေ pump ပစ္စည်းကိရိယာ
ကွန်ကရစ် Pump ကား
ကွန်ကရစ် pump တရုတ်
ကွန်ကရစ် pump ကုန်ကျစရိတ်
ကွန်ကရစ် pump Hose
ကွန်ကရစ် pump ထုတ်လုပ်သူ
ကွန်ကရစ် pump ထုတ်လုပ်သူများ
ကွန်ကရစ် pump စျေး
ကွန်ကရစ် Pump အရောင်း
ကွန်ကရစ် pump အပိုအစိတ်အပိုင်းများ
ကွန်ကရစ် Pump Trader
ကွန်ကရစ် pump စက်
ကွန်ကရစ် pump စက်များ
ရောင်းရန်တွင်ကွန်ကရစ် pump စက်များ
Kcp ကွန်ကရစ် pump
Putzmeister ကွန်ကရစ် pump
Sany ကွန်ကရစ် pump
လျှပ်စစ် Shotcrete မှုတ်လိမ်းစက် SPJ08-07-22
အလျားလိုက် HGY17 HGY19
ဒီဇယ် HBT80-16 ကွန်ကရစ်စုပ်စက်
ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် bob@conele.com အီးမေးလ်ပို့မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
Adress: TIEQISHAN လမ်း 413, CHENGYANG ခရိုင်, 266107, Qingdao, Shandong, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ် / Whatsapp: + 86-18306398869
Konecranes ၏ကြိုတင်ရောင်းချမှုနှင့်ရောင်းချပြီးနောက် ...
ကွန်ကရစ်စုပ်စက် t ကို၏ဆူညံသံဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လို ...
ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ထရပ်ကား,fရပ်ပြီးနောက် ...
Celia: မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလာကြည့်ပါ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရသည်
အဘယ်သူမျှမကျေးဇူးတင်ပါသည် Chat ကို Now ကို